Daacish oo dishay dhalinyaro kamid ahaa oo doonayey inay dib ugu noqdaan Yurub - Wargane News
Home Somali News Daacish oo dishay dhalinyaro kamid ahaa oo doonayey inay dib ugu noqdaan...
Daacish oo dishay dhalinyaro kamid ahaa oo doonayey inay dib ugu noqdaan Yurub
Kooxda Xagjirka ah ee Daacish ayaa lagu soo waramayaa inay magaalada Raqqa ee dalka Siiriya ku dishay koox dhalinyaro horey uga tirsanaa oo doonayey inay dib ugu noqdaan dalkii ay ka yimaadeen ee qaarada Yurub (Europe).
Dhalinyarada Jimcihii lasoo dhaafay lagu dilay Raqqa ayaa la sheegay in dhamaantood ay kasoo jeedaan dalka Holland, kuwaasi oo horey u yimid wadanka Siiriya si ay ugu biiraan kooxda ISIS (Daacish).
Khilaafka kooxda ka dhex dhalatay ayaa la sheegay inay sii xoogeysatay kadib markii mid kamid ah kooxda ISIS u dilay wiil doonayey inuu dib ugu noqdo dalka Holland isla markaana isaga baxo kooxdaasi, dilkan ayaa keenay in koox dhalinyaro oo asxaabtiisa ah oo iyaguna ka wada yimid Holland ay dileen mid kamid ah hogaanka ISIS ee arrintan ku dhex jiray.
Maamulka Daacish ee Raqqa ayaa la sheegay inuu xabsiga wada dhigay dhamaan kooxdii dilalka geystay, isla markaana Jimcihii lasoo dhaafay waxaa la dilay 8 kamid ahaa kooxdii dhalinyarada ahaa ee kasoo jeeday dalka Holland.
Weli wax faah faahin ah lagama bixin magacyada dhalinyarada la dilay iyo inay ku jiraan Soomaali, maadaama dhalinyarada heysta dhalashada Holland ee ku biiray kooxda Daacish ay ku jiraan Soomaali badan.
dhaliyaradda yurub ku
Why Somaliland people do not benefit from oil price falls?
DegDeg: Wasiirka Qorshaynta Dawladda aan iskeed isku Maamulin oo kusoo wajahan Badhan
Somaliland: Madaxweyne Ku Xigeenki Hore Ee Somaliland Oo Ka Hadlay Dagaalki Dhex Maray Somaliland Iyo Maamulka Punland
Deg Deg: Xog Culus La-taliyaha Gaarka Ah Ee Madaxweyne SIILAANYO Oo Sheegay Arrimo Badan Isaga Oo Ku Sugan Djibouti,,,